[Fest 2020 Beyond] ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 'Archenemy' သည်စူပါဟီးရိုးများနှင့်ယခင်ဘုန်းအသရေအပေါ်အလွန်လေးနက်စွာလွှမ်းမိုးမှု - iHorror
ပင်မစာမျက်နှာ ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း [၂၀၂၀ Fest Beyond] ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 'Archenemy' သည်စူပါဟီးရိုးများ၊
[၂၀၂၀ Fest Beyond] ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 'Archenemy' သည်စူပါဟီးရိုးများ၊
by Jacob Davison အောက်တိုဘာလ 17, 2020
ကရေးသား Jacob Davison အောက်တိုဘာလ 17, 2020
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကစူပါသူရဲကောင်းအမျိုးအစားသည် ပို၍ ကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေရုပ်ရှင်နှင့်ပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှု၏ tentpole ဖြစ်လာသည်။ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအား၌, ကဲ့သို့သောအဓိက franchise များအတွက် လက်စားချေသူများ, Batman, ပင့်ကူလူသား နှင့်အညီ, ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ extravaganzas မှရုပ်ပြစာအုပ်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်မြင့်မားပါပြီ။ သို့သော်နေဆဲပုံပြင်များကိုများစွာသောမိုtypes်းတိမ်ကိုအစား, မြေပြင်ကနေပြောပြနိုင်ပါတယ်အများအပြားပုံပြင်များအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ အကယ်၍ သူရဲကောင်းတစ် ဦး သည်သူတို့၏အင်အားကိုဆုံးရှုံးသွားလျှင်ကော။ သူတို့ဘာလုပ်ကြမလဲ ဒါက set-up ဖြစ်ပါတယ် အာခန်မီ.
မက်စ်လက်သီး (ဂျိုး Manganiello, စစ်မှန်သောသွေး) စကြဝuniverseာတွင်အင်အားအကြီးဆုံးစူပါဟီးရိုးဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးသူဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုသူသည်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့သူဖြစ်ပြီးအရက်အလွန်အကျွံသောက်သူနှင့်အမျက်ဒေါသပြwithနာရှိသောအရက်သမားဖြစ်သည်။ အုတ်နံရံများကိုထိုးနှက်ခြင်းနှင့်သူလုပ်နိုင်သည်ဟုဆိုသည်ကဲ့သို့သောအဆောက်အ ဦး များကို ဖြတ်၍ ထိုးဖောက်နိုင်ခြင်းကိုလိုလားသည်။ သူသည်မြို့ကြီးကြီးတစ်ခုတွင်သတိထားမိပြီးသူ၏ဖျော်ယမကာစပ်မှနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောသူနှင့်အမှန်တကယ်နားထောင်ရန်ဆန္ဒရှိသူတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံသည့်အခါစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ Hamster (Skylan Brooks, အမှောင်ဆုံးစိတ်များ) ဒေသတွင်း vlogger တစ်ယောက်၊ သတင်းစာကြီးကြီးတစ်ဆိုင်ကိုရှာဖွေနေသူဖြစ်ပြီးမက်စ်နှင့်အတူသူ၏အခွင့်အရေးကိုသူမြင်သည်။ သူသည်မက်စ်လက်စ်၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစူပါသူရဲကောင်းများနှင့်သူ၏စကြဝuniverseာမှ Archenemy နှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏သံသယများရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်အနည်းဆုံးဖျော်ဖြေရေးအတွက်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ သို့သော်သူ၏အစ်မ Indigo (Zolee Griggs) ကသူသည်မက်စ်၏အကူအညီကိုလိုအပ်လိမ့်မည်။ bit) The Manager (Glenn Howerton၊ Philadelphia တွင်အမြဲတမ်းနေသာသည်Indigo အားမိမိလက်များဖြင့်အလိုရှိလိုသော crimelord တစ်ယောက်။ အခုတော့မောင်နှမတွေ Max Max နဲ့ပူးပေါင်းပြီးသူရဲ့ပုံပြင်တွေကမှန်သလား၊ ဒါမှမဟုတ်သူရူးနေသလားဆိုတာကိုရှာဖွေရတော့မယ်။ ဒါမှမဟုတ်နှစ် ဦး စလုံး?
အာခန်မီ ကျွန်တော်တို့ကို 2019 ရဲ့စိတ်နှင့် bodybending ထိတ်လန့်ရုပ်ရှင်ပေးသောစာရေးဆရာ / ဒါရိုက်တာ Adam Egypt Mortimer မှလာသည် ဒံယေလဟာအစစ်မဟုတ်ဘူး. သူ၏နောက်ဆုံးစီမံကိန်းကဲ့သို့ပင်သူသည်တစ်မူထူးခြားသည့်အမျိုးအစားသို့မဟုတ်စတိုင်တစ်ခုတွင်လက်ဝှေ့ထိုးခံရခြင်းကိုတားဆီးသောအရာတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အာခန်မီ လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာရာဇ ၀ တ်မှုရုပ်ရှင်၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသည်းထိတ်ရင်ဖို၊ ပိုကောင်းတဲ့အချိန်ရောက်မှလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ လူတွေဟာစူပါသူရဲကောင်းရုပ်ရှင်တွေကိုမကျေနပ်ကြဘူးလို့မပြောတတ်ပေမဲ့သူတို့ဇာတ်လမ်းတွေရဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုအချို့ရှိနေပါတယ်။ ပြီးတော့ဒါကသူတို့ကိုဖြတ်ပြီးစီးသွားတယ်။ မက်စ်လက်စ်၏အမှန်တရားနှင့်လှည့်ဖြားမှုကိုပရိသတ်များကစူပါ၏ပြောဆိုချက်များ၏မှန်ကန်မှုကိုမေးခွန်းထုတ်မည့်သဲလွန်စများနှင့်အလှည့်အပြောင်းများကိုလေထဲတွင်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဒါပေမယ့်သူကသူဟာသူဟာတိုက်ခိုက်ရေးစက်တစ်ယောက်ဆိုတာသံသယဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။
ဂျိုး Manganiello သည် Max ကဲ့သို့စွမ်းဆောင်ချက်တစ်ခုအားပေးသည်။ သူ၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာပျောက်ဆုံးနေသောအာဏာနှင့်ရုန်းကန်နေရသောဒေါသထွက်နေသော Thor သို့မဟုတ် Superman ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ သူရူးနေရင်တောင်သူကသူမအုတ်နံရံကိုထိုးပြီးတစ်ခုခုကိုခံစားရန်နှင့်ယောက်ျား၏ ဦး ခေါင်းခွံကိုလက်များဖြင့်ထိုးနှက်နိုင်သည့်တိုင်အောင်သူနှင့်စာနာရန်မကူညီနိုင်ပါ။ သို့သော်နောက်တစ်ကြိမ်မှာသူ့စနစ်ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရုံဖြင့်သာဖြစ်နိုင်သည်။ Skylan Brooks နှင့် Zolee Griggs တို့သည်သူမနှစ်သက်သော 'sidekicks' အဖြစ်ထင်ရှားကြသည်။ Indigo as Zolee သည်သူမနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေသည့်တိုင်သူမ၏ခေါင်းကိုပကတိသေနတ်များနှင့်အတူပြင်းထန်သောအခြေအနေများသို့ရောက်ရှိနေချိန်တွင်ပင်သူမမှားယွင်းသောကောက်ကျစ်မှုများကိုပြသခဲ့ပြီးသူမနှင့်ဝေးကွာသည်။ Hamster သည်ပရိသတ်အတွက်အငှားစားသူဖြစ်ပြီး Max Fist ၏ဇာတ်လမ်းကိုထောက်ခံသည်။ သူ၏နက်နဲသောအရာဖြစ်စဉ်နှင့်နေ့စဉ်ကမ္ဘာကြီးနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအားစကြာ ၀ universeာအတွင်းရှုထောင့်တစ်ခုပေးခြင်း။ ထိုအ Glenn Howerton တွေ့ရခဲသောမန်နေဂျာအဖြစ်အပြည့်အဝလွလူကြမ်းသွားထွန်းလင်း။ အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသောအလွယ်တကူဒေါသထွက်သောရာဇ ၀ တ်မှုတစ်ခုသို့ထူးဆန်းသောအရာများထည့်သွင်းခြင်း။
Max Fist အားလုံးထွက်သွားတိုင်းလုပ်ဆောင်မှုမြင်ကွင်းများသည်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ဖြစ်သည်။ ပိုက်များ၊ သေနတ်များသို့မဟုတ်သူ၏မကြေကွဲနိုင်လောက်အောင်ပုံမပေါက်သောလက်များဖြင့်မက်စ်အသားများကိုသူသွားရာလမ်းထဲမှထုတ်ယူသည်။ အထူးသဖြင့်သူသည်ကျောရိုးမဲ့နေလျှင်။ ထို့အပြင်မက်စ်၏အတိတ်နှင့်ဖြစ်နိုင်ချေလှည့်စားမှုများသည်အလွန်အရောင်အသွေးစုံပြီးလွန်စွာအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရုပ်ပြလှုပ်ရှားမှုရုပ်ပြအစီအစဉ်များနှင့်ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းများကိုကျွမ်းကျင်စွာကိုင်တွယ်သည်။ မက်စ်၏ဇစ်မြစ်သည်ရုပ်ပြစာအုပ်ပုံစံစိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုတင်ဆက်ထားခြင်းကိုသာအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ ၎င်းသည်သိပ္ပံဝတ္ထုဆိုင်ရာရှုထောင့်နှင့် ပို၍ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာကောင်းသည့်အမှန်တရားနှင့်မက်စ်ကိုသူထောင်ချောက်ဆင်နေသောအဖြစ်မှန်များအကြားစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ခြားနားချက်ကိုဖန်တီးပေးသည်။ အချို့သောအခိုက်အတန့်လေးများကအနည်းငယ်ဆွဲယူနေသော်လည်းကြံစည်မှုများကတစ်လှည့်စီလှည့်လာသည်။
ငါတွေ့ကြုံခံစားရန်လုံလောက်သောကံကောင်းခဲ့ပါတယ် အာခန်မီ ၂၀၁၂ Beyond Fest 2020 မှာ Mission Tiki ရဲ့ drive-in မှာမျက်နှာပြင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာပေါက်ကွဲသံကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ထို့အပြင် Adam Egypt Mortimer နှင့် Joe Manganiello (သူ၏ခွေးနှင့်အတူ Bubbles!)၊ Skylan Brooks၊ Zolee Griggs နှင့် Spectrevision မှထုတ်လုပ်သူများအပါအ ၀ င်သရုပ်ဆောင်များသည်ဓာတ်ပုံနှင့်အော်ပရာများအတွက် Legion M ကားနှင့်အတူတက်ရောက်ခဲ့သည်။
ဓာတ်ပုံ Credit Lisa O'Connor - ဒါရိုက်တာ၊ စာရေးသူ Adam Egypt Mortimer၊ Joe Manganiello၊ ခွေးပူဖောင်းနှင့် ij လိယဝုဒ်
အာခန်မီ ဒါကြောင့်နှလုံး rending နှင့်မျက်နှာလာကြတယ်အဖြစ်ဖျော်ဖြေမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ လူများသည် Max Fist ဟူသောအမည်ကိုမသိသေးသော်လည်း Hamster ကဲ့သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
အာခန်မီ ဒီဇင်ဘာလ 11, 2020 တွင်ဖြန့်ချိရန်သတ်မှတ်ထားသည်။
2020လှုပ်ရှားမှုအာဒံကိုအီဂျစ် mortimerအာခန်မီပွဲတော်အပြင်Glenn Howertonကွောကျလနျ့ခွငျးဂျိုး Manganielloဆန်းစစ်ခြင်းသိပ္ပံဝတ္ထုSpectreVision
iHorror ရုပ်ရှင်ပွဲတော် 2020 - ဆုရသူစာရင်းအပြည့်အစုံကိုကြည့်ပါ။
'GI Joe: Operation Blackout' သည်မအောင်မြင်သောမစ်ရှင်ဖြစ်သည်